Ntuziaka Ntuziaka Pinterest efu site na Brainhost | Martech Zone
Friday, April 13, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Ndị si na Brainhost tụbara m akara na-akwalite nduzi ọhụrụ ha, Otu esi akwalite weebụsaịtị gị na Pinterest na echere m na ha arụ ọrụ dị mma na ya!
Ndị a bụ mkpụrụ edemede 3 sitere na Nduzi M Nwere Ike Usechọta Bara Uru:
Ka ọ dị ugbu a, Chobani yogurt, Dyson agụụ cleaners, Etsy.com, na ọbụna ụdị akpụkpọ ụkwụ Nike a ma ama nwere ama Pinterest peeji nke. Ihe na-eme ka ibe ha ma ọ bụ bọọdụ ha bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ bụ na anaghị eji ha eme akwụkwọ ahịa kama kama ọ bụ ngosipụta ọhụụ gbasara omenala ma ọ bụ ibi ndụ nke ndị na-ahọrọ akara ma ọ bụ ọrụ ahụ na-atọ ụtọ.
Pinning ga-akacha baa uru mgbe soro na ihe mmekorita nke networkntanetị (Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ndị na-ahapụ okwu, "repin" na ndị na - eso ndị ọzọ ga - ahụ nloghachi kachasị site na ọrụ Pinterest). Egbula ọdịmma onwe gị nanị. Dị ka ọrụ ọ bụla ọ bụla, ịkwalite ndị ọzọ ga-eme ka ha nweghachi ihu ọma. Ọ bụrụ na netwọkụ dị na ụlọ ọrụ gị, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ wee soro gị na-ewulite ikike gị.
Then ga-amalitezi iso ha ma mee ọrụ niile ga-abara gị uru. Dịka ọmụmaatụ, onye na-eme achịcha anyị na-ezo aka na ntuziaka a niile nwere ike ịgbaso ndị nrụpụta oven, ndị na-eme achịcha, ndị na-eme achịcha, ndị na-ede akwụkwọ nri, ụlọ ọrụ nri, na ndị ọzọ. Otu n'ime ndị a nwere ike ịhụ ụfọdụ mkpọ onye na-eme achịcha dị mkpa ma kwuo, dịka, ma ọ bụ repin ha. Nke a na - eme ka ndị na - ege ntị na - amụbawanye ma na-eme ka ohere maka okporo ụzọ ndị ọzọ na-abawanye na weebụsaịtị ma obu blog.
Pinterest enweela uto mara mma na ihe ngosi siri ike. Anyị dere banyere njikọ aka na Pinterest, na-agbakwụnye a Pinterest Pinit Button na WordPress ma kesara ụfọdụ Pinterest ọnụọgụgụ. Anyị nwekwara nke anyị Pinterest peeji nke Infographics Ahịa.
Tags: ụbụrụPinterestndu pinterestpinterest marekting ndu
Mee 26, 2012 na 3: 13 AM
Ejila m pinterest kwalite saịtị m na nsonaazụ ya tụrụ ịtụnanya na saịtị m si na #182 gaa #7 n'ime izu atọ.
Aghụghọ a bụ na anyị ga-etinyerịrị webụsaịtị anyị wee degharịa ya site na ọtụtụ ndị nke a bụ akụkụ kacha sie ike. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ pinterest agaghị eme repin mgbe ha adịghị ka ihe anyị tụnyere.
M na-eme mfe ihe outsource ya na fiverr wee nweta m saịtị pinned site 75 ndị ​​mmadụ, Amaghị m otú o nwere ike mere ya dị nnọọ search site na ịpị pinterest na fiverr na ị ga-ahụ ya na TOP. Ọtụtụ ndị ọzọ na-ere ahịa na-enye ọrụ pinterest na fiverr mana na ahụmịhe m ha enweghị ike ime ka weebụsaịtị m na-abawanye na SEO. Amaghị m ihe kpatara ya.
1. Google mmasị na-elekọta mmadụ media mgbaàmà otú ọ ga-akpado dị ka njikọ ugbo.
2. Ozugbo webụsaịtị anyị jikọtara ya nwere ọnụ ọgụgụ backlinks 3.
3. Ọbụlagodi na-akwadoghị ederede arịlịka (belụsọ njikọ url), ọ ka zuru oke maka itinye mkpụrụokwu anyị na nkọwa. Google ga-agụ ya!!
4. Ị mkpa ka ping njikọ nke gị atụdo ka gị na ebe nrụọrụ weebụ na-abawanye na SEO.